सकारात्मक सोचको आबश्यक्ता | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध सकारात्मक सोचको आबश्यक्ता
२०७८, ४ कार्तिक बिहीबार १६:०९
‘युवा’ शब्दलाई उल्टोबाट पढौ त ! ‘वायु’ हुन्छ आजसम्म युवा भन्ने वित्तिकै आँँधी, तुफानसंग लगेर जोडेको तुलना गरेको अधिक पाईन्छ । आँँधी र तुफानले अन्तत : विनास निम्त्याउँछ । आजको आवश्यकता, समयको पुकार भनेको हामी प्रत्येक युवा वायु (प्राण) बनेर देशको सेवामा निश्वार्थ एवम् अपेक्षा रहित भई समर्पित भएर हाम्रा पूर्खाहरुले हाम्रो देश नेपालको छवि विश्व मानचित्रमा जसरी बनाएका छन् त्यो छविलाई कायम राख्दै देशको उचाईलाई सर्वोच्च स्थानमा पुर्याउनु हामी यूवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ ।
विद्यालयमा कक्षा संचालन भईरहेको थियो । गुरुले पढाईरहेकै समयमा प्रसङ्गबश विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ । स्वर्ग जान को – को चाहान्छौ ? कक्षामा सबै जनाले हात उठाउँछन् तर कक्षाकोठाको पछाडीको बेन्चका कुनामा बसेको प्रकाश नाम गरेको विद्यार्थीले हात उठाउँदैन, गुरुलाई अचम्म लाग्छ स्वर्ग पनि जान नचाहने कस्तो विद्यार्थी ? गुरु विद्यार्थीको छेउमा जानु हुन्छ र सोध्नु हुन्छ–बावु प्र काश तिमी स्वर्ग जान चाहदैनौ ? प्रकाश ले टाउको हल्लाउँछन् र भन्छन् –‘म स्वर्ग जान भन्दा जुन धर्तीमा म बस्छु यहि धर्तीलाई स्वर्ग बनाउँछु ।’ आहा ! हेनूहोस् त, कति दिव्य विचार, सर्वोच्च विचार । यस्तो सोचलाई भनिन्छ सकारात्मक सोच ।
विश्वविद्यायलको अनुसन्धानका अनुसार सफलता भनेको ८८ प्रतिशत सकारात्मक सोच हो भने १२ प्रतिशत शिक्षा हो। त्यसकारण, जीवनमा सफल हुने क्षमता विकासका लागि सकारात्मक सोच महत्त्वपूर्ण कारक हो भन्न सकिन्छ
एउटा भ्यागुतो सर्पको मुखमा पर्छ अनि त्यो सर्पले विस्तारै विस्तारै मुखमा च्याप्छ तर सर्पको मुखमा परेको त्यो भ्यागुतोको अगाडी कुनै कीरा या लामखुट्टे उडेर आयो भने त्यतिखेर पनि लामखुट्टेलाई समात्न मुख खोल्छ । त्यस भ्यागुतोलाई आफ्नो गतिको चाँहि पत्तो नै हुदैन । आफै सर्पको आहारा बनिरहेको छ । अझ त्यस भ्यागुतोलाई लोभले छोडेको छैन् । यो प्रसङ्गले दिन खोजेको सन्देश एउटै छ– हामी पनि कालरुपी सर्पको मुखमा पर्ने नै छौ । यो शाश्वत छ जन्मेपछि एकदिन मर्नैपर्छ । विस्तारै विस्तारै दिन, रात, जाँडो, गर्मी भोग्दा भोग्दै आयु सकिन्छ । त्यसैले यो धर्तिमा हुन्जेल यस्तो कर्म गरौ हाम्रो भौतिक शरीरले विश्रान्ति लिँदा हाम्रा आफन्त, छरछिमेक, समाज र पेशालाई नै हाम्रो अभावको अनुभुति होस् । भनिन्छ–मानिसको उचाई वर्षले होईन उसको कर्मले नाप्नुपर्छ । जीवनको लम्बाई भन्दा पनि उचाईले महत्व राख्दछ ।
Previous articleसुँगुरकाे मिर्गाैला मानिसमा ‘सफल प्रत्याराेपण’
Next articleमाेना अन्तर्राष्ट्रियकाे अध्यक्षमा अमर छन्त्याल निर्वाचित